Garoon cusub oo kubadda cagta ah oo laga furay magaaladda Hargeysa + Sawirro
HomeAfricaGaroon cusub oo kubadda cagta ah oo laga furay magaaladda Hargeysa + Sawirro
Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa Shalay galab xadhiga ka jaray garoon cusub oo kubadda cagta ah, kaas la mid noqonaya nooca casriga ah ee Cawska mac-malka ah lagu goglo oo dhawaanahan ku soo badanayay caasimadda Hargeysa. Garoonkan cusub oo loogu magac daray Friend Ship, ayaa laga la dhisay xaafadda Masalaha ee degmadda Axmed Dhagax, waxaana ka soo qeyb-galay Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Maxamed Xuseen Dhabeeye, siyaasiga Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan), Agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuux Jibriil, guddoomiyaha Olympic-ada Somaliland Xasan Waraabe Cade guddoomiyaha xidhiidhka kubada cagta Somaliland Gacal Axmed Khayre, iyo xubno kale.
Ugu horeyn waxaa munaasibada xadhiga lagaga jarayey dhismaha garoonkan cusub hadal ka jeediyay mulkiilaha garoonkaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Cali, waxaana uu sheegay in si casri ah loo qalabeeyay. Waxa kale oo uu carabka ku dhuftay inaan lagu ciyaari doonin oo keliya kubadda cagta, hasayeeshee ay u sameeyeen qeybta orodada.
Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa amaanay garoonkan iyo qaabka loo dhisay, waxaana uu tilmaamay in si quruxda badan loo dhisay.
Guddoomiyaha Oloympicada qaranka Xasan Waraabe Cade oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in garoonkani uu wax badan ka tari doono ciyaaraha kala duwan ee magaaladda Hargeysa iyo weliba xaafada uu ku yaalo, waxaana uu ku amaanay maamulka garoonka xilka balaadhan ee uu iska saaray inay da’ yarta u sameeyaan garoonkan oo wata qeybtii orodka.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Somaliland Gacal Axmed Khayre oo isna halkaasi kalmado kooban ka soo jeediyay ayaa sheegay inuu aad ula dhacay garoonkan cusub, waxaanu ku tilmaamay inuu noqonayo mid bog cusub u furi doona ciyaaraha Somaliland. Siyaasiga Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) oo ka mid ahaa masuuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa soo dhaweeyay dhismaha garoonkan cusub ee laga dhisay xaafadda Masalaha ee degmadda Axmed Dhagax.
Gaba-gabadii Agaasimaha guud oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad u soo dhawaynayaan garoonkan cusub, uuna noqon doono mid wax-tar u yeelanaya dhallinyarada reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan.
Garoonkan ayaa noqonaya kii 13-aad ee laga hir-geliyo caasimadda Hargeysa, kuwaas oo habeen iyo maalinba lagu ciyaaro dhallinyar Sports oo badana ay ku kulmaan kuwaas oo ku xifaaltama kooxana soo sameysta.
Wenger Oo Dhoola-caddayn ku qaabilay guushii Arsenal Ka Gaadhay Tottenham
Suarez Iyo Neymar Oo Jebinaya Rikoodh Taariikhi Ah
29/11/2015 Abdiwahab Ahmed